Ungakhetha kanjani i-niche efanele ku-Amazon bese uthola amagama angukhiye asesha kakhulu kunaleyo?
Okokuqala, ngincoma ukuthi uqale indlela yakho yokuthola amagama angukhiye ase-Amazon aphethe itafula elilula elidalwe, isibonelo, usebenzisa ama-Google Spreadsheets. Into yukuthi kuzodingeka uthole ukuthi yikuphi okudingeka kakhulu okwamanje, ngokuhambisana nokuthi kungenzeka ukuthi unikeze amanani amanani aphakeme kakhulu. Futhi kungcono ukuthi ufake okungenani izinketho ezimbalwa ezithembisayo ngokumelene nomunye. Ngaleyo ndlela, kuzoba lula ukuhlukanisa ngokushesha amaphuzu abo obuthakathaka ekutholeni, kanye nokubeka ngokucacile izinhlangothi ezinamandla kunazo zonke ezenziwe yi-niche ngayinye, ngokuhambisana nokuchazwa kwamagama angukhiye asesha kakhulu nanoma yiziphi ezinye izinkulumo ezivelele ezihambelana nembonini noma isigaba somkhiqizo - real passport buy.
Ngakho-ke, uma usungule uhlu lokuhlola oluyinhloko, yisikhathi sokudonsa ndawonye yonke inhlanganisela engaba khona ngokuphathelene namagama angukhiye wakho we-niche e-Amazon. Futhi kuyadingeka ukumboza yonke imingcele esemqoka kanye nezibalo zewebhu ezijwayelekile zento ngayinye ozoyigcina. Nansi indlela engcono kakhulu yokunconywa kokugcwalisa uhlu lwakho lokuhlola ku-Google Spreadsheets - qiniseka ukuthi zonke izinto zikhona kulokhu okulandelayo:
1. I-Niche - kufanele ibe ikholomu yokuqala uphenyo lwakho ukuqala ngalo. Vele uqhubeke nokuhlunga konke ukuhluka okubi okuvulekile ukuze kube khona ikholomu yamanje egcwele ama-candidacies asele ongakulindela ukuba abe yisinqumo sakho sokugcina se-niche efanele ku-Amazon ngamagama angukhiye asesha kakhulu ahlobene nesigaba.
2. Isilinganiso sokusesha ivolumu - lapha uphakanyisiwe ukuba ubhale phansi yonke inani elilinganiselwe levolumu yokusesha ethathwe ngokwesilinganiso. Ngokuzenzakalelayo, la mazinga amanani azoboniswa nge-KWFinder ithuluzi.
3. I-Common Range of Search Volume - le kholomu kuhloswe ukukhombisa izitayela eziyinhloko zevolumu yokusesha kanye namaphethini okuziphatha okujwayelekile mayelana nokushintsha okusebenzayo (kusuka efonini ephansi kunazo zonke kuya kwesiteji esiphezulu sokuguqulwa). Ukusikisela: kungcono ukuthi ube nengxenye yokuhlukaniswa kwedatha ngezikhathi zangezinyanga ngesikhathi esisodwa.
4. I-Keyword Competitiveness - yiyo leyo ndawo lapho uhloswe khona ukubeka ukuhlolwa kwegama elingukhiye useshe amagama angukhiye ku-niche. Uma usebenzisa i-KWFinder, uzosekelwa ngamamethrikhi amaningi okuncintisana ahlukene. Ngisho ukuthi ngesizathu esithile bayibiza ngokuthi yi-SEO Competition Rank.
5. I-DA ephezulu - sebenzisa ithuluzi le-KWFinder noma i-SERPchecker ukucacisa ukuthi mangaki amasayithi namakhasi ewebhu akhonjiswe emiphumeleni yokucinga ye-Google ephezulu ene-Domain Authority score efika ngaphezu kwamaphesenti angu-40.
6. I-PA, i-CF, i-TF ephezulu - cishe echaza futhi kufana nekholomu yangaphambilini, izigaba ezintathu ezilandelayo zizobonisa isibalo samakhasi / ikhasi elifanayo ngeGunya eliPhezulu lePhezulu (PA), i-Citation Flow (CF), kanye ne-Trust Flow (TF) ngayinye.
7. Ubuncane bokuthola amandla - ikholomu yokugcina nebonakalayo ebaluleke kakhulu kuhloswe ukugqokisa umehluko omkhulu kanye nokuthola kwakho okuqakathekile kumagama angukhiye ahloliswe kakhulu nge-niches ephakanyisiwe e-Amazon okumele ihlolwe. Ngalokhu kubalwa (yebo, kungase kubonakale sengathi kuyinkimbinkimbi kakhulu) Ngikisela ukusebenzisa i-AmaProfits dot com noma yimuphi omunye umsebenzi ofanayo we-intanethi - futhi usuqedile.